यस्तो छ थाहा पाउनुहोस् रुघाखोकीको घरेलु उपचार
डिसेम्बर 15, 2018 अगस्ट 27, 2019 साइन्स इन्फोटेक	5 Comments उपचार, डा. राम बहादुर बोहरा, रुघाखोकी
रुघाखोकीको घरेलु उपचार । गरम पानी, सुप, झोलीय पदार्थ आदि प्रर्याप्त मात्रामा लिने गर्नुपर्दछ । आलु, बैगन, गाजर फर्सी, लौका, शिशीको अचार, दही, चिसो, अमिलो तथा गुलियो पदार्थहरुको सेवन गर्नुहुदैन । दुवाको एक सानो टुक्रा पानीमा उमालेर त्यसमा एक चिम्टी नुन हालेर गार्गिलिङ गर्नुपर्छ । यसवाट गलाको दर्द, नाक बन्द, गलामा खिस-खिस आदिमा आराम हुन्छ ।
गरम पानीमा भिक्स हालेर बाफ लिनले पनि श्वास नलीमा टाँसिएर बसेको कफ खुकुलो भएर बाहिर निस्किन्छ र आराम महशुस हुन्छ । तुल्सीको पात, अदुवा, कालो मरिच एवं ल्वाँगको मिश्रण मसाला युक्त चिया-रुघा खोकीमा अत्यन्तै लाभदायक हुन्छ । अलिकति अदुवाको रस-गरम गरेर मन तातो भएपछि अलिकति मह मिसाएर सेवन गर्नाले पनि फाईदा गर्दछ । यसैगरी एक गिलास तातो दुधमा एक चुट्की बेसार एवं सौफको धुलो राखेर पिउनाले पनि आराम मिल्दछ ।
← सनातन धर्म संस्कृतिको अवमुल्यन गर्नेले एकपटक सोच्ने कि ?
दमको कारण र उपचार →
मे 20, 2019 मे 21, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
अगस्ट 4, 2018 डिसेम्बर 2, 2018 साइन्स इन्फोटेक 5
5 thoughts on “रुघाखोकीको घरेलु उपचार”
Pingback:खोकी (Cough) र यसको उपचार
Pingback:पेप्टिक अल्सर र यसको घरेलु उपचार
Pingback:यस्तो छ दमको रोग हुनुको कारण र घरेलु उपचार, जानी राखौ
Pingback:यस्तो छ टाइफाइड रोगको हर्बल र आयुर्वेदिक उपचार, जानी राखौ